(Dhageyso):-Suldaan Warsame Oo ka hadley Shaqaaqadii ka dhacdey Beydhabo Baaq Nabadeedna u direy. – hareerley News
(Dhageyso):-Suldaan Warsame Oo ka hadley Shaqaaqadii ka dhacdey Beydhabo Baaq Nabadeedna u direy.
Posted on August 10, 2019 August 11, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Suldaan Warsame ayaa baaq nabadeed u direy walaalaha shaqaaqada ku dhex martey duleedka magalada baydhabo taasoo keentey in dad gaaraya ila iyo sagaal ruux ku dhintaan.
Sudaanka ayaa culumaaudiinka iyo waxgaradka deegaanadaas ugu baaqay iney kala dhex galaan walaalaha halkaasi xurgufta ku dhex martey si loo joojiyo in cadaawada ay noqoto mid sii fogaata.
Sidoo kale waxaa ay ku booriyey in masuuliyiinta Maamulka k/ Galbeed ay kala dhex galaan dadkaasi si dhiig dambe Uusan si micno daro ah ugu daadan markale.
Halkaa hoose ka dhageyso
Mas’uul sare oo katirsan ciidanka dowladda Sacuudiga ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Jiddah ee ku teedsan xeebta badda Cas. Warar xalay laysla dhax qaaday baraha bulshada ayaa sheegayay in la dilay Jeneraalkii ugu sarreeyay ee ciidamada sida gaarka ah u ilaaliya Salmaan Bin Cabdul Caziiz oo ah boqorka dowladda Aala Sacuud. War rasmi […]
Gudoomiyaha Magaalada Marka Oo kormeerey Wadooyinka Xeran Baaqna direy:=(Daawo)
Posted on December 2, 2019 December 2, 2019 Author Hareerley News
Gudoomiyaha Magaalada Marka ayaa shaley kormeerey wadooyinka Xeran kuwaas oo u bahan in wax laga qabto isku socodka Dadweynaha iskaga kala Gooshaya halkaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegey in ay u fidiyeen Gurmad iyo Dadaal ay u sameeyeen dadka ku dhibaateysnaa wadadaas. “Waxaan baaq u direynaa dhamaan Cid waliba oo ay damqasho ku jirto in fatahadaha ay […]
Madaxweyne Farmaajo Oo Shacabka u direy Hambayo ku Aadan Munaasabada Ciida Carafo.
MSF: More Than 80 Migrants Rescued Off Libya